Siyaasa Itoophiyaa: ''TPLF' shira siyaasaa ittiin beekamu itti fufuun ibsa rakkoo biyyattii hammeessu baase' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright AMA
Koreen hoji raawwachiiftuu Amaaraa Dimokiraatik Paartii (ADP)n kora hatattamaa ajjeechaa aanga'oota ol-aanoofi rakkoo nageenyaa mudate irratti mariyachuuf taa'een ibsa Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay (TPLF) haala yeroo irratti baaseef deebii kenne.
'TPLF' shira siyaasaa ittiin beekamu itti fufuun balleessaa ofii kan biraatti haqataa jira jechuun qeeqe.
Ibsi 'TPLF' baase shira siyaasaa ittiin beekamu xaxuu kan itti fufe ta'uu qofaa osoo hin taane, badii siyaasaa ofiin raawwachaa ture kan saaxiledha jedheera ibsi Koree hoji-raawwachiiftuu ADP.
Koreen Hoji raawwachiiftu ADP kun, yeroo yaalii fonqolcha mootummaa gaggeeffameen anga'oonni ol-aanoo naannichaa ajjeefamanii gadda keessa jirru kanatti ibsi 'TPLF' baase akka 'madaa keenya mukaan waraanuuti' jedhe.
"Ibsa paartii obbolummaan waliin qabsaa'aa jiran irraa hin eegamneefi kan qaanii guddaa qabudha."
Rakkoo tibbanaan warri Buraayyutti qabaman Finfinneetti dabarfaman
Paartiin naannoo Amaaraa bulchus faana ODP bu'aa laata?
Ibsi ADP kun 'TPLF' badiifi haala rakkisaa biyyattiin keessa jirtuuf ofiin itti gaafatamaa ta'ee osoo jiruu, badii ofii dhoksachuuf quuqamaa ta'ee dhiyaachuun salphinas jedhe.
Qabsoo cimaa Amaara dabalatee sabaafi sab-lammoota biyyattii biroo waliin taasisaniin injifannoo argame irra deddeebiin tuffachuudhaan duubatti deebisuuf yaalii taasisaa jiru, garee warra diiguutti bobba'e waliin duubaan hojjechaa jira jedha ibsi ADP.
Kana malees, bifa adda addaan gara badiifi sirna farra dimokiraasiifi sarbama mirga namoomaa hamaa turetti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu qofaa osoo hin taane, hattootaafi yakkamtoota seeraan barbaadaman ofkeessa dhokfatee dandeettii ittiin warra kaan qeequ hin qabu jedheera ibsi kun.
"Heeraafi sirna heera mootummaa ofiin hin kabajiin, sobaan kan quuqamuuf fakkaachuun 'TPLF' ammoo gocha badii ofii dhokfachuuti."
'TPLF' dhaaba badii siyaasaa raawwaturraa yoomiyyu barachuu hin dandeenyedha. Kanaaf agarsiiftuun ammoo rakkoo nageenyaa naannoo keenya keessattiifi naannoolee ollaa gidduutti uumaman duuba goree akka nu waraanaa ture ni bekna, ragaa qabatamaa hedduus ni qabna."
Walumaa galatti ADPn ibsa dubbii ijoo armaan gadii of keessaa qabu baaseera:
Duula TPLF nurratti bane jedhuun akka balaleeffatu, wal qixxummaa uummata Naannoo Amaaraa tumsuun tokkummaa biyyaafi jijjiramaf akka biyyatti jiru akka deeggaran deeggartoota , miseensota fi hoggantoota paartii ADP 'f waamicha dhiyeesse.
Uummata Naannicha, dhalattoota Amaaraa biyya keessaa fi ala jiraataniin nageenya , misooma fi dimokiraasi naannicharratti tumsa gaafate.
Saba, sablammoonni fi uummattootni Itoophiyaa tumsa isaaniif galateeffachuun, fuuldurattis akka tumsaaniif gaafata, ABUT (TPLF)garuu shira xaxuun himata.
Uummatni naannoo Amaaraa fiTigiraay seenaan, aadaa fi amantiin walitti dhufeenya bara dheeraa qaban akka itti fufu waamicha dhiyeesse.
Paartiin dhaaba biyya bulchu waliin hundeessanii fi Paartileen deeggartoota waliin tokkummaa cimsaa jijjiirama akka biyyatti jiru deeggarra jedha.
Raayyaan Ittisa Biyyaaa fi qaamoleen nageenyaa naannicha badiirraa hambisuu isaaniif galateeffachuun fuldurattis cimsanii akka itti fufan waamicha dhiyeessee.
Miseensota 'ABIN Buraayyutti kilaashii 105 waliin' qabamanirratti murtaa'e
Yaa'iin dhaaba naannoo Amaaraa bulchu Saba Amaaraatiin eessaan ga'a laata?